Imithombo yegadi, ukuhombisa kunye nokuphumla | IBezzia
Imithombo yegadi, ukuhombisa kunye nokuphumla
UMaria vazquez | 04/06/2021 18:00 | Ukuhonjiswa
Imithombo ibikho kuyo yonke imbali a isiqwenga esisisiseko kwizitiya. Into yokuhombisa enganeli nje ukongeza isimilo kubo, kodwa ikwayiyo negalelo ekudaleni iimeko ezizolileyo nezibonakalisayo ngenxa yokumbombozela kwamanzi.
Kwihlobo elomileyo elifana nelethu, imithombo yegadi ikwasisixhobo sokuzisa ukutsha kule ndawo ingaphandle. Izizathu zokufuna beka umthombo emyezweni wakhoke ngoko zininzi. Uninzi lwezinto ekufuneka uzithathele ingqalelo ukhetha enye.
1 Izinto zangaphambili ekufuneka ziqwalaselwe
2 Iindidi zemithombo yegadi
2.1 Ngokwesitayile / ngezinto zayo
2.2 Ukusebenza kwayo
Izinto zangaphambili ekufuneka ziqwalaselwe
Awuyi kulindela nantoni na ukuba uqala ukukhangela imithombo yegadi ngaphandle kokuba uhlalutye ngaphambili apho ufuna ukuyibeka khona kwaye zeziphi iimpawu ozijongileyo kuyo. Amathuba kwintengiso akapheli kwaye ukuzibuza imibuzo embalwa ngaphambi kokuba uqale kuyakukhawulezisa ukukhangela kwakho.
Uza kuyibeka phi? Embindini wegadi okanye eludongeni?
Ngaba ukhetha umthombo wamanzi wesiko okanye imodeli esele ikhethiwe?
Ngaba ufuna siphi isimbo segadi yakho? I-Classic, yangoku, iMeditera, encinci, yendalo ...
Ngaba isandi somthombo sibalulekile kuwe? Zombini inqanaba lokuhamba kunye nokuphakama kwejeti yamanzi kuya kuba nefuthe kubungakanani bengxolo evela kumthombo.
Ngaba ungayidibanisa namanzi abalekayo? Ngaba uzimisele ukwenza umsebenzi okanye ukhetha ukusebenzisa ezinye iindlela zendlela yokusebenza?
Ukuphendula le mibuzo kuya kukunceda uqwalasele iifayile ze olona hlobo lwefonti olufanelekileyo yegadi yakho. Ngale ndlela unokuluhluza uphando lwakho kwaye ufikelele kwimithombo yegadi enomdla kuyo ngokukhawuleza. Ke, phakathi kwamathuba okwenyani, uyilo kunye nohlahlo-lwabiwo mali luyakunceda wenze isigqibo sokugqibela.
Iindidi zemithombo yegadi
Ukuba ukhe wazama ukuphendula imibuzo, ngekhe kube nzima kuwe ukuba uqikelele ukuba zininzi izinto esinokujonga kuzo ukuhlukanisa imithombo yegadi kwiintlobo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, namhlanje siza kuqwalasela ezimbini, apho sijonga ngokubaluleke kakhulu: ukusebenza kunye nezinto eziphathekayo.
Ngokwesitayile / ngezinto zayo
Izinto okanye iseti yezinto ezenziwe ngumthombo wegadi misela isitayile sakho. Uninzi lwemithombo yesitayile yeklasikhi yenziwe ngamatye, kunye nezo zesimbo seMeditera kuyinto eqhelekileyo ukuba nezinto zeceramic.
Imithombo yelitye: Imithombo yelitye yendalo isetyenzisiwe kwimbali yonke njengeyona nto kugxilwe kuyo egadini. Iziqwenga eziqingqiweyo kunye neefom zobugcisa ngokwesiko zihlala kwiziko lezona gadi zintle. Abo baneesitya okanye imikhombe, eyabo indawo, ngokwesiko behombise iindonga zezindlu ezinkulu zelizwe. Zombini zibonakaliswa ziindleko zazo eziphezulu.
Imithombo ethosiweyo: Olu hlobo lwemithombo luhlala lwenziwe ngekhonkrithi kwaye luhonjiswe ngeethayile. Kwinkcubeko yama-Arabhu babonisa iimilo ezijikeleziweyo kunye nemibala ebalabala kakhulu; Le yimithombo esiyifumana ngokubanzi kumazantsi eSpain. Nangona kunjalo, kuyenzeka ukuba wenze ezinye iintlobo zeefonti ezivela kwiithayile, iifonti ezinobugcisa obuqheleke ngakumbi. Njani? Sebenzisa imigca ethe tye kunye neethayile ezimnyama kunye ezimhlophe.
Imithombo yentsimbi: Ixesha elingaphezulu, imithombo yesinyithi ifumana uphawu lwepatina ebanika uphawu. Kwisinyithi unokufumana imithombo eyenziweyo enobuhle beklasikhi, kodwa nezinye zenziwe ngamacwecwe ezilula ezifumana ubugcisa banamhlanje kwaye zilunge ngokugqibeleleyo kwiigadi ezincinci okanye eziphefumlelweyo zaseMpuma.
Inkalo ebaluleke kakhulu ekufuneka ithathelwe ingqalelo luhlobo lokusebenza komthombo. Uninzi lwazo luneemoto zombane ukuba unganxibelelana negridi okanye ubaleke kwiibhetri zangaphandle okanye kwiiphaneli zelanga. Gcina ukhumbula ukuba kuxhomekeke apho ufuna ukubeka khona umthombo, ukuqhagamshela kwinethiwekhi yombane kunokufuna imisebenzi eyongezelelweyo kunye nokunyusa indleko.
Uhlobo luni lomthombo ongathanda ukuhombisa ngalo igadi yakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Imithombo yegadi, ukuhombisa kunye nokuphumla
Ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni
Yintoni yokutya ukukhulula iPMS